qmmp 1.4.0 yakatoburitswa uye idzi ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memavhiki akati wandei ebudiriro kuvhurwa kwe vhezheni itsva yeakakurumbira odhiyo mutambi "qmmp 1.4.0”Uye mushanduro iyi nyowani shanduko dzinonakidza dzinoratidzwa, uyezve zvinouya neyakagadziriswa kune yayo plugin package.
Kune avo vasingazive nezve mutambi uyu, ndinogona kukuudza izvozvo Qmmp muchinjikwa-chikuva odhiyo mutambi uyo wakanyorwa muC ++ uye Qt ine interface yakafanana neWinamp kana XMMS iyo inotipawo mukana wekuwedzera Winamp makanda.
Qmmp hazvitsamiri pana Gstreamer uye inopa rutsigiro rweakasiyana masisitimu ekuburitsa masisitimu ezwi rakanyanya kurira. Zvakare inotsigira kuburitsa kuburikidza OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) uye WASAPI (Win32), pamwe inotsigira akawanda mafomati ekuteerera.
Mukati meimwe ye maficha anowanikwa nemutambi kugona kushandisa mapfupi ekhibhodi yekukurumidza kudzora yekutamba odhiyo, pamwe Qmmp inogara ichichengeta ndangariro yekushandisa yakaderera kunyangwe paanga achitamba kwemaawa.
1 Chii chitsva muqmmp 1.4.0?
Chii chitsva muqmmp 1.4.0?
Iyi itsva vhezheni yemutambi inouya nemamwe shanduko huru kumamojuru ako izvo mu ffmpeg basa idzva rekuverenga rakaitwa, rutsigiro rweyakavakirwa-mukati CUE (yeMonkey's Audio fomati), fomati zita rinoratidza tsigiro yeDSD (Direct Stream Dhijitari), iyo yepasi vhezheni yeFFmpeg yakakwidziridzwa ku3.2 uye kutsigirwa kwebabav kwabviswa.
Iyo YouTube yekutsigira module yakawedzerwa iyo inoshandisa youtube-dl kune iyo plugin yakatarwa uye iyo ffap module yakagadziridzwa.
Mune module yekuratidza mazwi, hwindo geometry kuchengetedzwa kwakawedzerwa uye iyo srutsigiro rwevanopa vakasiyana siyana (based on the Ultimare lyrics complement), nepo zve cdaudio ikozvino inopa yakawanda metadata kuburitsa uye wedzera kusangana ne KDE Solid uye module yekurekodha ine kugona kunyorera kune imwechete faira.
The module qsui yakagadziridzwa sezvo kugona kushandura iyo yekumberi color yazvino track inoitwa, iyo iratidziro iri muchimiro cheoscilloscope, basa rekumisazve mavara ekuratidzira, scroll bar ine waveform, imwe nzira yekuongorora, ma gradients mune shanduko pakati pemavara eanoryssereswa, nyika yakavandudzwa .
Kana zviri zvitsva izvo zvinoratidzwa mune iyi nyowani vhezheni, tinogona kuwana iyokugona kuratidza avhareji bit rate, kunyangwe nhepfenyuro / chishambadziro chando
Wakawedzera kugona kubatanidza akawanda ma tag mune mpeg module, kugona kumhanyisa kuraira pakutanga nekuguma kwechirongwa, rutsigiro rwakagadziridzwa rwekunze playlists, yakagadziriswa m3u rutsigiro uye yakawedzera tsigiro yemafomu makuru endian mune iyo PulseAudio module.
Yeimwe shanduko dzataurwa mune iyi vhezheni itsva:
Iyo ReplayGain scanner ine rutsigiro rweOgg Opus.
SOCKS5 proxy rutsigiro yakawedzerwa.
Wakawedzera kugona kushandura pakati pekutamba.
Wakawedzera kugona kudzima EQ yakapfuura mbiri.
Wakawedzera hope yekuvhara module.
Module yakaparadzana yakawedzerwa kutumira ruzivo kuna TeereraBrainz.
Wakawedzera otomatiki kuhwanda kwemamenyu ebasa asina chinhu.
Paunenge uchishandisa Wayland, iyo qsui interface inoshandiswa nekutadza.
Kune mazhinji anoburitsa module, sarudzo yekukurumidza kudzima ruzha inoitwa.
Kuitwa kwakasarudzika kweiyo CUE parser inokurudzirwa.
Unogona kusarudza rondedzero yemafomati usati wachengeta.
Wakawedzera rairo mutsara sarudzo "-pl-inotevera" uye "–pl-prev".
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve shanduko dzinoitwa mushanduro iyi nyowani, unogona kubvunza iyo ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Kune avo vari kufarira kugona kuisa ichi mutambi pane yavo system, vanogona kuenda kune inotevera chinongedzo kupi Iwe unogona kuwana mirairo yekuparadzirwa kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » qmmp 1.4.0 yakatoburitswa uye idzi ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo